News – Page2– The News Post
ဆိုင်ကယ် တစ်စီးအတွက်နဲ့ ကံမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မန္တလေးက ဆရာဝန်လေး ရဲ့ အဖြစ်
မန်တလေးမှာ ဆရာဝနျတဦး ဆယျကယျ တစီး အတှကျနဲ့ လုယကျ ခံရကာ ကွှလှေငျ့ခဲ့ရ တနျဘိုးမဲ့ ငမိုကျသားေ တှကွောငျ့ တနျဘိုးရှိ ဆရာဝနျ လူငယျ တဦးကွှလှေငျ့ခဲ့ရပီ မန်တလေးမွို့အရှပွေ့ငျဖကျ ပုသိမျကွီးမွို့ နယျ လိမျပ ငျကှကျသဈ …
November 3, 2020 By thu han soe News
စိန်ရွှေတွေ သိန်းထောင် ချီရောင်းရ တဲ့ လိုက်ဖ်ေ တွ ရဲ့ အမှောင် ဖက်ြ ခမ်းကို အောင်သမာ ဓိ မှ ဦးအောင် ဒဲ့ပြောပြီ –
စိန်ရွှေတွေ သိန်းထောင်ချီရောင်းရတဲ့ လိုက်ဖ်တွေရဲ့ အမှောင်ဖက်ခြမ်းကို အောင်သမာဓိ ဦးအောင် ဒဲ့ပြောပြီ ဦးအောင်မင်္ဂလာပါဗျ..မင်္ဂလာပါ..မေးစရာလေးရှိလို့ပါ..အေးမေးပါဗျာ.. ခုတလော Live လွင့်ပီး စိန်တွေ ရွှေတွေရောင်းနေကြတဲ့ကိစ္စလေး မေးချင်လို့ပါ..မေးပါဘာသိချင်တာလည်း..ဦးအောင်တို့အောင်သမာဓိကရော Live လွင့်ပီးရောင်းသေးလား? ရောင်းပါတယ်.. ဒီလိုရောင်းတော့ Live ရောင်းနေတုန်းဝယ်ရင် …
ဆေးလိပ် အရက် မသောက်တာ တောင် ကိုဗစ်ရောဂါဆိုးကြီးအား အလူးအလဲ ခံလိုက်ရသူမှ ပြောပြလာ ခဲ့တဲ့ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံ
ကိုဗစ်စစစ်တဲ့နေ့ကနေ စပြီး အစစအရာရာ ဂရုစိုက်ပေးခဲ့သော ဧရာဝတီစင်တာမှ ဆရာဝန်၊ ဆရာမများ၊ သူနာပြုများ ၊ဗော်လန်တီယာများ နှင့် ဧရာဝတီစင်တာမှကိုဗစ်လူနာဗော်လန်တီယာများ အားလုံးကိုလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် လိုအပ်တာပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ ဟာနာကုမ္ပဏီ၊ ငှက်သိုက်တွေ တကူးတက ပို့ပေးတဲ့ …
(၂၁) ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်း ဆုကံ ထူးရှ င် (ရုပ် / သံ)
၂၁ကြိမ်မြောက် ယ၅၃၉၃၅၄ နံပါတ်ဖြစ် သိန်းတ စ်သောင်းဆုကို ပခုက္ကူမြို့ခိုင်ရွှေဝါထီဆိုင် ပိုင်ရှင် ဦးကျော်နိုင်က ရောင်းမ ကုန်သည့် ထီလက်ကျန်မှ သိန်းတစ်ေ သာင်းဆုကြီး ဆွတ်ခူးရရှိသွား ပါတယ်။ credit-Khaing Shwe War Lottery …
November 1, 2020 By thu han soe News
ကျပ်သိန်း ငါးထောင်ဆုကို ရွှေဘိုမြို့နယ် ဆိပ်ခွန်ရွာ ကိုနေတိုးလှိုင် မှ ဆွတ်ခူးရရှိ
ကျပ်သိန်း ငါးထောင်ဆုကို ရွှေဘိုမြို့နယ် ဆိပ်ခွန်ရွာ ကိုနေတိုးလှိုင် မှ ဆွတ်ခူးရရှိ ၂၁ကြိမ်မြောက် သိန်း ၅၀၀၀ဆုကို အပိုင်ေ သချာတဲ့ မန္တလေး ခိုင်ရွှေဝါ ထီဆိုင်ကြီး မှ ရွှေဘိုမြို့နယ် ဆိပ်ခွန်ရွာ. ကိုနေတိုးလှိုင် မှဆွတ်ခူ …
ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကလည်း နိုင်ငံတော်တော် များများမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာပါပဲ။ အရေးပေါ်လူနာတင်ကားသာ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့နေမယ်ဆိုရင် လူနာတင်ကားမှာ ပါလာတဲ့ လူနာအတွက် မတွေးရဲစရာပါပဲ။ ဆေးရုံကို အချိန်မီရောက်ဖို့ ယာဉ်ကြောပိတ်နေတဲ့ကားတွေကို လမ်းလေးနည်းနည်းလောက်ဖယ်ခိုင်းဖို့ကျတော့လည်း လူနာတင်ကားပေါ်က ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအတွက် ခက်ခဲပါတယ်။ တချို့ကားတွေ၊ လူတွေကတော့ လူနာတင်ကားလာရင် …
October 31, 2020 By thu han soe News
ကူးစက်မှု အရင်လထက်စာရင် တည်ငြိမ်လာတဲ့ ကိုဗစ် (ကူးစက်နှုန်းနှေးလာပြီ)
အရင်လ ထက် စာရင် ကူးစက်မှု တည်ငြိမ်လာတဲ့ ကိုဗစ် (ကူးစက်နှုန်း ‌နှေးလာပြီ) စုစုပေါင်းလူနာ တက်တဲ့နှုန်းကို ကူးစက်မှု ၂ ဆဖြစ်တဲ့အချိန် နဲ့ ကြည့်ရင် လည်း ၂၃ ရက်လောက်ရမယ်။ အဆိုးဆုံး စက်တင်ဘာ …
October 30, 2020 By thu han soe News
မန္တလေး၊ မန္တလာသီရိအားကစား ကွင်းတွင် လူနာ(၃၀၀) ဆန့် ကိုဗစ် ယာယီဆေးရုံ ကို ထပ်မံဆောက်လုပ် ရန်လှူဒါန်းလိုက် တဲ့ ဦးဇော်ဇော်
ကိုဗစ် လူနာများလာ လို့ မန္တလာ သီရိ အားကစား ကွင်း အတွင်း လူနာ (၃၀၀) ခန့် ထား နိုင် မည့် ယာယီ စင်တာ တစ်ခု ၁၀ရက် အတွင်းအပြီးတည်ဆောက် …
October 28, 2020 By thu han soe News
စံချိန်တင် ကူးစက်နေ တဲ့ အမေရိက န်က ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာနဲ့ လုံးဝ လျော့တွ က်လို့ မရသေး တဲ့ ကိုဗစ်
စံချိန်တင်ကူးစက်နေတဲ့ အမေရိ ကန်က ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာနဲ့ လုံးဝ လျော့တွက်လို့ မရသေးတဲ့ ကိုဗစ် အမေရိကားမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ (အောက်တိုဘာ ၂၃)က စံချိန်တင် ပိုးတွေ့ရှိမှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့တည်းနဲ့ လူပေါင်း ၈၂၉၀၀ …
October 27, 2020 By thu han soe News
ကိုဗစ်ေ ရာဂါပိုးကို ထုံးပ တ်ပြီးတော့ သုတ်သင် မယ့် မြန်မာပြန် သား များ( ဘယ် သူက မြှောက်ပေးလိုက်လဲမ သိဘူး)
မန်းလေးမှာ ဘယ်သူ က စလိုက်လဲ မသိဘူး .. နှင်းတွေများကျနေလား အောင်းမေ့ ရလောက်အောင် ထုံးတွေကို လမ်းတွေမှာ ဖြူးကြတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကိုဗစ်ပိုး သေအောင်တဲ့။ ကိုဗစ် ပိုး သေတာ မသေတာ …
October 26, 2020 By thu han soe News